गोरखा २ हेभिवेट भिडन्तः कसको स्वर गुञ्जिएला संघीय संसदमा ? – Halkaro
बाबुरामलार्इ गोरखा २ छाडेर १ राख्यो काँग्रेसले
काठमाडौँ । २ वटा क्षेत्र रहेको गोरखामा यसपटक निर्वाचनको बेग्लै रौनक छाएको छ । मंसिर १० को निर्वाचनमा यहाँ हुने हेभिवेट भिडन्तको चर्चा चुलिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदै गर्दा नेकपा एमालेको समर्थनमा माअोवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ उम्मेदवार बन्ने भएपछि सबैको ध्यान गोरखा २ मा केन्द्रित भएको छ ।
नयाँ शक्तिले प्रदेश क मागेको छ भने कांग्रेस दुवै प्रदेश आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराईबीच शनिबार दिउँसो बस्ने बैठकले साझा उमेद्वार तय गर्ने जनाइएको छ।
साथै वाम गठबन्धनमा सहभागी एमालेलाई गोरखामा एउटा प्रदेश दिएर अरु माओवादीले राखेको छ। क्षेत्र १ को ख प्रदेशमा एमालेका तर्फबाट केन्द्रिय सदस्य रामशरण बस्नेत चुनावी मैदानमा छन्। गठबन्धनबाट गोरखा १ मा माओबादीका हरि अधिकारीले टिकट पाएका छन् भने प्रदेश क मा लेखबहादुर थापाले टिकट पाएको माओवादीले जनाएको छ।
वाम गठबन्धनबाट गोरखा २ प्रतिनिधसभामा नारायणकाजी श्रेष्ठले टिकट पाएका छन्। यस्तै प्रदेश क मा कमला नहर्की र ख मा अमर तमुले टिकट पाए। गठबन्धनले समानुपातिकतर्फ पनि उमेद्वार तय गरिसकेको जनाएको छ। हितराज पाण्डे र चुडामणि खड्का प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तरगत समानुपातिकतर्फ उमेद्वार बनेका छन् ।
एउटै क्षेत्रबाट दुर्इ पूर्व राजनीतिक सहयात्रीहरू चुनावी होडमा होमिएका छन् । स्मरण रहोस यी दुबै नेपालको सहमितिय राजनीतिमा योगदान भएका नेता हुन् । अब यी दुर्इ मध्ये एक जना संघीय संसदमा देखिने छैनन् ।
← ३२ जिल्लामा एमालेले टुंग्यायो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार
राजधानीमा गोली चल्दा एक जना घाइते →